Steps To Help You With Your Hairdressing Regimen | ခွငျကောငျ Nits
Ease up on small appliances that you when styling your hair in order to restore and strengthen its condition. Over-use of curling irons and blow dryers can damage your hair, which can lead to frizzy hair and split ends. သင်၏ဆံပင်ကိုနုပျိုစေဖို့အပူမှအားလပ်ချိန်များကိုယူပါ.
အကြံပြုချက်! If your hair is damaged, don’t use appliances on it forawhile so that it can recover. ဆံပင်ကောက်ကောက်နှင့်လေမှုတ်စက်ကဲ့သို့သောပစ္စည်းများသည်ဆံပင်ကိုတကယ်ပင်ပျက်စီးစေနိုင်သည်, ကခက်ခဲထိန်းသိမ်းထားဖို့အောင်.